Inqubomgomo Yemfihlo - AfricArXiv
Ikheli lewebhusayithi yethu lithi: https://info.africarxiv.org.
Iyunithi yezinhlamvu engaziwa eyakhiwe kusuka ekhelini lakho le-imeyili (elibizwa nangokuthi yi-hash) kungenzeka inikezwe kwinsizakalo yeGravatar ukubona ukuthi uyayisebenzisa. Umgomo Wobumfihlo bezinsizakalo zeGravatar uyatholakala lapha: https://automattic.com/privacy/. Ngemuva kokugunyazwa kwamazwana akho, isithombe sephrofayela yakho siyabonakala emphakathini kumxholo wokuphawula kwakho.
Uma ushiya amazwana esizeni sethu ungangena ngemvume ukuze ulondoloze igama lakho, ikheli le-imeyili kanye newebhusayithi kumakhukhi. Lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula kuwe, ukuze ungadingeki futhi ukugcwalisa imininingwane yakho lapho ushiya omunye umbono. Lawo makhukhi azohlala unyaka owodwa.
Uma ushiya umbono, amazwana kanye nemethadatha yawo agcinwa unomphela. Lokhu kwenzelwa ukuthi sikwazi ukubona futhi sigunyaze noma yimaphi amazwana wokulandela ngokuzenzakalelayo esikhundleni sokuwabamba kulayini wokulinganisa.